Askar la sheegay inay ka soo carareen Eritrea oo Garoowe lagu soo bandhigay - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Askar la sheegay inay ka soo carareen Eritrea oo Garoowe lagu soo bandhigay
Maamulka Puntland ayaa gelinkii dambe ee maanta Magaalada Garoowe ku soo bandhigay shan nin oo dhalinyaro ah, oo sida ay sheegeen ka tirsanaa dhalinyaradii tababarka loogu qaaday dalka Eritrea.
Dhalinyaradan ayaa lagu soo bandhigay Xarunta Wasaaradda Amniga Puntland ee Magaalada Garoowe, ka dib markii uu halkaasi ku qaabilay Wasiirka Amniga Puntland, Cabdisamad Maxamed Gallan.
“Maantay waxaa Xafiiska Wasaaradda na loogu keenay dhalinyaro ka mid ahaa dhalinyaradii sida khaldan inta loogu sheegay in loo qaadayo wadanka Qatar ee ka dibna loo qaaday Eritrea.” Ayuu yiri Wasiirka Amniga Puntland.
Wasiirka oo la hadlay BBC ayaa yiri “Dhalinyaradaas waxay sheegeen dhib badan inay kala kulmeen, marka 1aad meeshii loo sheegay meel aan ahayn in la geeyay, qayb badan oo iyaga ka mid ah xitaa inay waalidkood ka war hayn meesha la geeyay iyo in la qaadayaba.”
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Waxay sheegeen Xarunta NISA ee Dowladda Soomaaliyeed in lagu uruuriyay, tiradoodana illaa shan kun iyo shan boqol (5,500) inay gaareysay. Waxay ka sheegeen dhib badan oo xerada gudaheeda ku soo maray, waxay sheegeen in Madaxweynihii Dowladda Soomaaliyeed ee xilka uu ka dhamaanayo Farmaayo inuu ugu tagay illaa saddex jeer, inay aad ugu farxeen markii la yiri Madaxweynihii Somaliya ayaa joogga oo idin imaanaya inay dhoolatus iyo gaaddo ka ciyaar ku soo dhaweeyeen, ka dib markii ay damceen daruufahooda iyo dhibta ay meesha ku qabaan inay kala hadlaan inuusan arrintaa kala hadlin, oo uu ka soo tagay, saddexdii jeerba.”
Wasiir Gallan ayaa ku waramaya inay xaqiijiyeen in dhalinyaradan ka mid ahayd ciidamadii ay Dowladda Federaalka tababarka ugu qaaday dalkaasi Eritrea.
“Arrintaa waan hubsanay, waana xaqiijinay inay yihiin dhalinyaradii ciidanka ahaa ee loo qaaday Eritrea ee ka soo baxay.” Ayuu yiri Wasiirku.
Cabdisamad Maxamed Gallan, Wasiirka Amniga Puntland ayaa sheegaya in dhalinyaradan ay ku biirin doonaan Ciidamada Puntland.
“Anaga sidii dhaqanka lagu yaqaanay Puntland waxa uu ahaa cid kasta oo Soomaaliyeed, oo ay ka mid yihiin dhalinyarada tababarada ku soo qaadata dalka dibadiisa ama gudahiisa oo diyaar u ah in ay qayb ka noqdaan Ciidamada Puntland ee ka hawlgala Puntland gudaheeda iyaga oo ah Ciidamo Soomaaliyeed, dad, dal iyo deegaan Soomaaliyeed-na ka hawlgala inaanu ku soo dhoweyno, qof walbana lagu qiimeeyo aqoontiisa iyo xirfadiisa waxa uu soo bartay darajo u dhigma lagu qaato.” Ayuu yiri Wasiir Gallan.